Sawirro: Wasaarada ciyaaraha iyo dhalinyarada KG oo Baydhabo uga furtay kulan dhalinyaro 200 ah
arlaadi April 11, 2017 No Comments
Wasaarada Dhalinyarada Iyo Ciyaaraha Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Baydhabo ee Xarunta gobolka Baay waxa ay ku qabatay shirka madasha wadatashiga dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaliya iyo Wasaarada dhalinyarada.
Shirkaan oo socon doona mudo ku siman labo maalmood ayaa diirada lagu saari doonaa inta uu socdo arimo dhowr ah oo quseeya dhalinyarada oo ayna ka mid tahay kor u qaadida hal abuurka dhalinyarada, helida shaqooyinka, doorka ay ku leeyihiin nabadeynta dib u dhiska hormarka arimaha Siyaasada iyo dhiiragelinta dhalinyarada dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada.
In ka badan 200 dhalinyaro ah oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa soo xaadirey kulankii maanta kuwaasi oo ka kala socdey Jaamacadaha, dugsiyada sare iyo masuuliyiin ka socotay Sportska maamulka Koonfur Galbeed oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed, wasiirka Warfaafinta, xildhibaano iyo gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo furitaankii maanta ee kulankan goob jooge ka ahaa hadalo koobana halkaasi ka jeediyay.
Masuuliyiintaan ayaa waxa a ydhalinyarada kula dar daarmeen in ay ka faa’idaystaan waqtigooda, dhalinyaradana ay yihiin awooda loo adeegsado horumar wadan walba oo dunidaan ku yaala iyo burburkiisa.
Waa kulankii ugu horeeyay ee wadatashi ee ay qabato wasaarada dhalinyarada iyo cayaaraha Koonfur galbed ayadoo kulankan uu noqon doono mid muhiim u ah dhalinyarada iyo ka warqabkooda.
Maxamed Cabdicasiis Salaad